Filtrer les éléments par date : mardi, 01 juin 2021
mardi, 01 juin 2021 20:04
Pilo kely : Maison d'arrêt sa lékôly
Amin'ny afara mba zanatany alainareo anamboatra tragno, maro mahay miasa tragno mpiasa aty, fa Mahajanga mafana 35°c no anaovanareo tragno karaha prison tsy misy fenêtre devant.
Mba mangalaha honondraha edy anao Président fa katakata montraka kony omendreo mpiara-miasa aminao reo ein, na taha soratra jiaby io diso.
Sary mampiaingo lakilasy ataovy sary zaza gasy, fa tsy sary zana-bazaha. Tsy aleo atao teny gasy EPP ireny, zaza gasy aby anie mianatra ao, tsy misy vazaha ao ndray raiky.
Manodidina jiaby hatramin'ny WC mbola lékôly aby anaran'io, fa tsy trano io to. Rehefa te hanao raha manara-penitra izany dia ataovy arak'izay marina, jusqu'amin'ny lakoro hisoman'ny zaza reo.
Aza adigna président fa mpampianatra sy programam-mpampianarana no sekoly voalohany ein, tsara ny misy trano orange, fa aza atao matsiko ny mpampiatra sy ny programa.
Za ndraiky misaotra anao fa miasa anao, fa olonao tsy mamango ein, aiko nisy ministre nahazo note d'évaluation 04/20 fa mbo nitananao fo.
Bonne nuit atsika jiaby
mardi, 01 juin 2021 17:55
Nampody niany ilay tsena ny lavanio taty ANJIABE , District Nosy Be
mardi, 01 juin 2021 10:01
Mahajanga : Mitokona ireo mpiasa Oniversité
Mitokona ireo mpiasan'ny Oniversité ao Ambondrona Mahajanga noho ny tsy fandraisana ny karama.
Tany Mahajanga ny Filoha Andry Rajoelina omaly ary mbola mitohy amin'iny faritra andrefana iny ny diany androany.
Misy manao fanadinana ireo mpianatra amin'izao.
mardi, 01 juin 2021 09:32
Fahafatesan’i Dr Hasina Ramaherimandimby : “Tsy nisy ifandraisany tamin’ny vaksiny nataony ny valin'ny Autopsie”
Nanao tatitra ny valin'ny "Autopsie" nanoloana ny fahafatesan'i Dr Ramaherimandimby Hasina tany Fianarantsoa ny 20 mey 2021 ny Minisitry ny fahasalamam-bahoaka, Pr Rakotovao Hanitrala Jean Louis.
mardi, 01 juin 2021 09:25
Andohatapenaka : Hisy “Guichet unique” hanaovana ny “Visite technique” sy “Assurance”
Nandray fepetra manokana ny ATT ho fiomanana amin’ny fiverenan’ny fitaterana amin’ny zotra nasionaly sy rezionaly manomboka amin’ny zoma 4 jona 2021.
Hatambatra eny amin’ny Gare Routière Maki Andohatapenaka ny fanaovana “Visite technique” sy ny “Assurance” ary koa ny fanavaozana “licence” hanamorana ny filan’ireo mpitatitra.
Hanomboka ny Talata izany ary hitohy hatramin’ny alakamisy.
Tsy misy fiovana ny sarandalana, toy izany koa ny isan’ny olona isaky ny seza. Telo ho an’ny “minibus”, efatra amin’ny Sprinter sy Crafter ary dimy isaky ny seza ho an’ny Carandal sy TATA.
mardi, 01 juin 2021 09:12
Fibatana fonjamby : Tafaverina an-tanindrazana ireo Atleta Malagasy Tompondakan'i Afrika
Tafaverina an-tanindrazana ny alatsinainy 31 May 2021 ny delegasiona malagasy nahitana atleta efatra niatrika ny fiadiana ny tompondakan'i Afrika amin'ny taranja fibatana fonjamby, izay natao tany Nairobi, Kenya.
Nandrombaka medaly volamena 08, volafotsy 01 ary alimo 3 ny Atleta Malagasy tany Kenya.
mardi, 01 juin 2021 09:05
EPP Manarapenitra Amborovy – Mahajanga : Nisantarana ny fizarana "tablette numérique"
Vita ary notokanana ny 31 may 2021 ny EPP Manarapenitra tao Amborovy - Mahajanga. Ny taona 2019 no napetraka ny vato fototry ny fotodrafitrasa dia vita tanteraka izany ankehitriny.
Natomboka teto amin'ny EPP Amborovy ihany koa ny fizarana ireo "tablettes numériques" izay vokatry ny fiaraha-miasan'ny fitondram-panjakana amin'ny orinasa HUAWEI. "Tablettes numériques" miisa 1 500 no ho zaraina manerana ny Nosy.
Mbola tafiditra ao anatin’ny fiaraha-miasa amin’ny HUAWEI sy ny fitondram-panjakana ihany koa ny fandaharan’asa “Seeds for Future”. Hisy ny fifantenana sy ny fanomezana an’ireo mpianatra Malagasy izay sangany indrindra amin’ny fanadinana baccalauréat ny fahafahana manaraka “cours en ligne de haut niveau” eo anivon’ny Campus HUAWEI, ary hahafan'izy ireo mitsidika izany campus izany any Chine.
mardi, 01 juin 2021 09:02
Faritra Boeny : Mpianatry ny CRINFP Boeny miisa 142 noraisina mpiasam-panjakana
Nanolotra ny taratasy fandraisana ho mpiasam-panjakana ho an’ireo mpampianatra avy niofana tao amin’ny CRINFP (Centre Régional de l'Institut National de Formation Pédagogique) Boeny ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena Marie Michelle Sahondrarimalala ny alatsinainy 31 may 2021 tao amin’ny Baobab Tree.
Miisa 142 ireo mpampianatra vaovao ireo, ary handray ny asany any amin’ny « Zone 2 » sy « Zone 3 ». Nanao taratasy fanekena ihany koa izy ireo ny handray ny asany any amin’ireo faritra ireo mandritra ny 5 taona, ho fizaràna sy fanomezana fahalalana ho an’ireo mpianatra rehetra tsy ankanavaka, indrindra fa ireo mpianatra any ambanivohitra.
Nankahery ireo mpampianatra nahavita fiofanana ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena, ary nampahafantatra ihany koa ny sazy mety hihatra raha tsy mahatana ny teny nomeny ireo mpampianatra vaovao ireo, dia ny fandroahana tsy ho mpiasam-panjakana intsony.
« Tsy mbola vita ny ezaka ary tsapa fa mila fanohanana akaiky ny lafin’ny fanabeazana », hoy ny Filoha Andry Rajoelina. Nambarany fa hamoraina ny fandraisan’ireo mpampianatra karama. Hanome « carte » ho an’ireo mpampianatra ny Paositra Malagasy hahafahan’ny mpampianatra misitraka ny karamany tsy tara isam-bolana.
mardi, 01 juin 2021 09:00
01 juin : Journée mondiale du lait
01 juin : Journée mondiale du lait.
mardi, 01 juin 2021 08:20
01 juin : Journée mondiale des parents
01 juin : Journée mondiale des parents.